နေအိမ် / အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဘို့အမော်ကွန်း
22/01/2018 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
တစ်ဦး ICSID ခုံသမာဓိခုံရုံးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာချီးမြှင့် 40 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဧရိယာအတွက်ပတ်ဝန်းကျင် restore ပြန်၏ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်တာဝန်ယူမှုအဘို့အအီကွေဒေါမှနစ်နာကြေးသန်း. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခုံသမာဓိတစ်တန်ပြန်ဒီဆုချီးမြှင့် Gabrielle Kaufmann-Kohler ၏ရေးစပ်ထားတဲ့ခုံသမာဓိခုံရုံးအားဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်, ဂျစ် Stern နဲ့စတီဖင် Drymer အတွက် […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, ICSID အနုညာတစီရင်, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူပြည်နယ်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး
30/12/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
Third-party ရန်ပုံငွေ၏ထုတ်ဖော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိတရားစွဲဆိုမှုတွင် ပို. ပို. အဖြစ်များလာ. ဒါကကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်ပါသည်, အဆိုပါကိစ္စတွင်တခုတခုအပေါ်မှာအပြင်ဘက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုအဲဒီမှာအကျိုးသက်ရောက်ကြောင်းတကယ်တော့နှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုထိုကဲ့သို့သောင့်လင်းမြင်သာအဖြစ်ကိစ္စများအဖြစ်, ဘက်မလိုက်မှု, လွတ်လပ်ရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခ. ဥပမာအားဖြင့်, third-party ငွေကြေးထောက်ပံ့အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခရှိပါတယ်လျှင် […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, ICC ကအနုညာတစီရင်, ICSID အနုညာတစီရင်, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူပြည်နယ်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး
19/12/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
အပေါ် 18 ဒီဇင်ဘာလ 2017, စပိန်ရဲ့အထင်ရှားဆုံးခုံသမာဓိစင်တာများသုံးခုကသူတို့ပေါင်းစည်းရေးဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ်နားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေးထိုး. ဤသည်စပိန်ပဲရစ်အပြိုင်လိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခုံသမာဓိများအတွက်ပိုမိုနှစ်သက်ဖွယ်စင်တာအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားမှုတစ်ခုအတွက်စပိန်အစိုးရ၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုနောက်ထပ်ဖြစ်ပါသည်, လန်ဒန်, စင်္ကာပူ, ဟောင်ကောင်နှင့် […]
အောက်မှာ Filed: အနုညာတစီရင်သတင်းအချက်အလက်, အနုညာတစီရင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း, စပိန်အနုညာတစီရင်, UNCITRAL အနုညာတစီရင်